Utholwe elenga esigxotsheni obexhuma ugesi ngokungemthetho | News24
Utholwe elenga esigxotsheni obexhuma ugesi ngokungemthetho
Johannebsurg - Bangu-63 abantu basemijondolo asebebulawa wugesi oxhunywe ngokungemthetho eBuffalo City kule minyaka emithathu edlule.
Isigameko sakamuva senzeke eMzamomhle ngoLwesithathu lapho indoda eneminyaka engu-25 ubudala kusolwa ukuthi ibimatasa izama ukuxhuma izintatmbo zikagesi ngokungemthetho esigxotsheni sikagesi ngesikhathi ishokhwa wugesi, yashona.
USakhiwo Mangxoyi wasemijondolo yaseMzamomhle, eGonubie, utholwe elenga esigxotsheni sikagesi eduzane nakubo ngoLwesithathu ebusuku ngezithuba zabo-19:00.
UMangxoyi ushokhwe wugesi ngesikhathi ezama ukuxhuma izintambo zikagesi esigxotsheni ngemuva kokuba kuphele ugesi emijondolo embalwa ngoLwesithathu ntambama.
OLUNYE UDABA:Ushokhwe wugesi washona owesifazane, ethi uyakhanda
Ukushokheka kukaMangxoyi kuza ngemuva kosuku lwezingxoxo ebeziphakathi kukaMasipala waseBuffalo City nomphakathi zokuba kulindwe inkontilaki ukuba iqedele isigaba sokuqala somsebenzi wokufakwa kukagesi.
Idolobha belifaka ugesi ezindlini zomxhaso ngesikhathi abasebenzi bankontilaki bexoshwa endaweni ngamalungu omphakathi abefuna ukuba ugesi ufakwe kahle yonke indawo.
UMzwandile Peter, ongubaba kaMangxoyi, usole umphakathi ngokushona kwendodana yakhe.
Uthe ubewucelile umphakathi ukuba uyeke ukucela indodana yakhe ukuba "ibakhandela" ugesi, kodwa kufane nokuthela amanzi emhlane wedada.
"Angisenayo indodana manje kanti futhi angikaboni noyedwa wala bantu abebephoqa indodana yami ukuba igibele esigxotsheni sikagesi."
UMzamomhle unemijondolo engu-3 100 enogesi oxhunywe ngokungemthetho.
Okhulumela umasipala uSamkelo Ngwenya uzwakalise ukudabuka wathi idolobha lihlela ukuqeda ngogesi oxhunywe ngokungemthetho.